China EAS Anti-Izu 4040mm RF Soft Label Supermarket-5050 Label manufacturers na suppliers | Etagtron
EAS Anti-Izu 4040mm RF Soft Label Supermarket-5050 Label
Soft labeelu si kpọmkwem na-arụ ọrụ ụkpụrụ bụ: wụnye ihe electronic nchọpụta na ụzọ ọpụpụ nke nnukwu ụlọ ahịa, arapara a labeelu ma ọ bụ itinye ihe mgbochi na-ezu ohi ike labeelu na ngwaahịa, na-etinye adụ labeelu na ngwaahịa ma ọ bụ jiri a mkpọchi oghere ime ngwaahịa gafere onye ọrụ nchoputa n'ọnụ ụzọ nke ọma. Ọ bụrụ na ịwepụ ngwongwo na aha dị nro ma ọ bụ akara siri ike na-enweghị ịkwụ ụgwọ, mgbe ị na-agafe onye na-achọpụta ya, onye na-achọpụta ihe ga-emenye ụjọ, si otú ahụ na-echebe ọdịmma akụ na ụba nke ahịa.
Aha Ahịa: ETAGTRON
Nọmba :dị: RF 5050 Label (Mba 5050 / RF)
:Dị: RF Label
Akụkụ: 50 * 50MM (1.97 ”* 1.97”)
N'ihu ihu: udegba ọtọ / White / Barcode / ngwaahia
Ugboro: 8.2MHz ± 5%, 9.5MHz ± 5%, 10.5MHz ± 5%
Hot gbazee nrapado: Henkel
RF 5050 Soft Label Supermarket Security Mkpu ihe mmetụta
① Na-agbakwunye akara nro RF na ngwaahịa chọrọ nchebe, ọ bụghị na ngwaahịa ọla
A dịgasị iche iche nke nha ịhọrọ site na, họrọ dị ka size nke ngwaahịa
③ Na-emetụta usoro sistemụ redio niile, degaussing nke decoder nwere ike zere mkpu mgbe ị na-akwụ ụgwọ
0.5-2.0m (depneds na sistemu & enviornment na saịtị)
Udegba ọtọ / White / Barcode / ngwaahia
Main nkọwa nke RF soft labeelu:
1.Le labelụ dị nro bụ maka iji otu oge ma tinye ya n'elu ngwaahịa ma ọ bụ n'ime igbe ahụ. Mgbe onye ahịa kwụrụ ụgwọ ahụ, ejiri demagnetizer mee ihe.
Usoro sistemụ AM na sistemụ RF dị iche iche n'ihi ụkpụrụ ọrụ ha dị iche iche yana ọrụ ha dị iche iche; mkpado dị nro na nke siri ike ejiri mee ihe abụọ abụghị nke ụwa niile. Ngwaọrụ nke degaussing dịkwa iche, ngwaọrụ mmeghe nwere ike ịbụ ụwa niile.
1.Akwụkwọ kacha elu ： 65 ± 4μm
2.Na-ekpo ọkụ gbazee ： 934D
3.Emegide etchingink ： Greenink
5.Nrapado ： 1μm
6. CPP ： 12.85 ％ μm
7.Nrapado ： 1μm
8.AL ： 50 ± 5 ％m
9.Emegide etchingink ： Greenink
10.Hot-gbazee ： 934D
11.Ihe ntinye ： 71 ± 5μm
12.Ọkpụrụkpụ ： 0.20mm ± 0.015mm
♦Ntinye nke aha mmado zoro ezo. Nke mbụ, a ga-enwerịrị akara ntụaka, dị ka koodu mmanya. Mgbe ahụ debe akara nro ahụ zoro ezo n'ime 6cm nke akara ngosi. N'ụzọ nke a, onye okwu ugwo maara ọkwa niile nke aha ahụ, iji zere mkpebi mmeghe ọ bụla n'oge ọrụ ..
♦Ntughari di iche nke uzo ichoro. Ntinye nke akara mmado kwesiri idozi ya dika ogwepu ngwongwo na oge. Ngwaahịa nwere ọkwa dị elu nwere ike ịgbanwe ụzọ ejiri akara dị nro, karịa, ma ọ bụ obere, ma ọ bụ n'elu, ma ọ bụ zoo, ka ngwaahịa wee nwee ike ịchekwa nke ọma. Banyere usoro a nakweere, ọ ghaghị ịdabere n'ụkpụrụ ahụ na onye na-ego ego nwere ike ịhọrọ nke ọma.
Na ọdabara Ọnọdụ
Arụ ọrụ Ihe osise
Nke gara aga: EAS Anti-Izu 4040mm RF Soft Label Supermarket-3030 Label
Osote: RF 8.2Mhz EAS Mini Dome Tag Na Pin Retail Security Tag-Mini Dome
RF 8.2Mhz EAS Mini Tag Square Black na Pin Re ...
EAS Antenna AM System Acryli Elu àgwà eas ...
EAS Hard Tag AM Akwa 58KHz Mkpu Mkpu Mkpu ...
RF 8.2Mhz EAS Middle Dome Tag Na Pin Retail S ...
EAS Ike Tag AM 58KHz Oti mkpu na Uwe supe ...
EAS ọnụ ala uwe m mgbochi na-ezu ohi digital akwụkwọ ozi ...